လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: မွန်ဘို်င်းဟိုတယ်မှ ဓါးစာခံအချို့လွတ်မြောက်
မွန်ဘို်င်းဟိုတယ်မှ နို့စို့ကလေးငယ်အပါအဝင် အနည်းဆုံး ဧည့်သည်(၂၅)ရောက်ကို အစောင့် အရှောက်များ ခြံရံလျက် အသင့်စောင့်နေသော ကားများထဲသို့ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (သောကြာနေ့)တွင် ပို့ပေး လိုက်ပါသည် ။ ဧည့်သည်အများစုမှာ နိုင်ငံခြားသားများ ဖြစ်ပါသည် ။
အစောပိုင်းက အီတလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှ ပြောကြားရာတွင် Trident ဟိုတယ်တွင် ဓားစာခံ အဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသည့် လမ်းလျှောက်ကာစ ကလေးငယ်နှင့် မိခင်အပါအဝင် အီတလီလူမျိုး(၇)ယောက် လွတ်မြောက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ဟိုတယ်တွင် ဓားစာခံများ မည်မျှကျန်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးဟု ဆိုပါသည် ။
လွန်ခဲ့သောနေ့က အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသော ဟိုတယ်(၂)ခုအနက် (၁)ခုဖြစ်သည့် Oberoi ဟိုတယ်မှ ဧည့်သည်များကို အစောင့်များခြံရံလျက် ထုတ်ယူသည်ဟု ဆိုပါသည် ။ သို့ရာတွင် သေနတ်သမားများ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဧည့်သည်အရေအတွက်ကို မသိရဟု ဆိုပါသည်။ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တိုက်ခိုက်ခံရသော ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဗဟိုဌာနနှင့် ဇိမ်ခံဟိုတယ်(၂)ခုကို လုံခြံုရေးတပ်ဖွဲ့များက ရှင်းလင်းလျက်ရှိပါသည် ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အခြာ မွန်ဘိုင်းမြို့၏ နေရာ(၇)နေရာ၌ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ည နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ(၂၅၀)သေဆုံးပြီး၊လူ(၃၀၀)ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယတွင် CNN၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် CNN- IBN အား အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြံုရေးတပ်ဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် J.K.Dutt က ပြောကြားရာ၌ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (သောကြာနေ့)နေ့လည် (၁)နာရီတွင် Oberoi ဟိုတယ်၌ သေနတ်သမားတစ်ယောက်ကို ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်မျှ ကျန်ရှိသည်ကို မသိရဟု ၎င်းက ဆိုပါသည်။
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (သောကြာနေ့) အစောပိုင်းက Taj ဟိုတယ်စစ်ဆင်ရေးကို ဦးစီးနေသည့် ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးက ပြောကြားရာ၌ ဟိုတယ်အတွင်း၌ ဓားစာခံ (၁၅)ယောက်မှ (၂၀)ယောက် ကျန်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာရှိကြောင်း၊ သေနတ်သမား(၂)ဦး သို့မဟုတ် (၃)ဦးအနက် (၁)ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိထားကြောင်းဖြင့် ဆိုပါသည်။
Taj Mahal ဟိုတယ်တွင် ပိတ်မိနေသည့် အစ်မနှင့်တူမဖြစ်သူအား ဟိုတယ်အပြင်ဘက်တွင် စောင့်နေသော ညီမက ပြောကြားရာ၌ သူမသည် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ကြာသာပတေးနေ့) နံနက်(၃)နာရီ ကတည်းက ရောက်နေကြောင်း၊ ယခုနာရီ (၃၀)နီးပါးရှိသည့််တိုင် မည်သည့်သတင်းနှင့် မည်သို့ ကယ်တင်နေသည်ကို မသိရကြောင်းဖြင့် ပြောကြားပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် သေနတ်သံများကို Taj Mahal နှင့် Oberoi တွင် ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ကြာသာပတေးနေ့)တစ်လျှောက်လုံး ကြားနေရကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ၏ အကြောင်းရင်းကို မသိရကြောင်း ဆိုပါသည်။
ဂျူးလူမျိုးဗဟိုဌာနအနီးရှိ Chabad house တွင် သေနတ်သမား(၂)ဦးမှ (၃)ဦးရှိနေသည်ဟု ယုံကြည် ရကြောင်းဆိုပါသည်။ အိန္ဒိယအမျိုးသားလုံခြံုရေးတပ်ဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် J.K.Dutt က CNN. IBN ကို ပြောကြားရာ၌ ဓားစားခံများ အားလုံးကို လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။
Chabad house အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာသူများအား အထဲမှ သေနတ်နှင့် လက်ပစ်ဗုံးများဖြင့် ပစ်ခတ်ပါသည်။ (၄)နာရီအတွင်း ဗုံး(၃)ခါ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ နံနက်မလင်းခင် ရဲဂျစ်ကားများ၊ မီးသတ်ကားများနှင့် လူနာတင်ကား(၁)စီးတို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး၊ အရုဏ်တက်အချိန်တွင် ရဟတ်ယာဉ်(၃)စီးရောက်လာ၍ စစ်သား(၂)ဒါဇင်ခန့်သည် အမိုးပေါ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် (၅)ကြိမ် သို့မဟုတ် (၆)ကြိမ်ခန့် ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲသံများနှင့် လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံများကို ကြားရပါသည်။ တပ်သားအချို့သည် အနီးဆုံးတိုက်များတွင် နေရာယူလိုက် ကြပါသည်။
Chabad- Lubavitch International ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Rabbi Josh Runyan က ပြောကြားရာ၌ Rabbi Gavriel Noach Holtzberg (၂၉)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ဇနီး Rivka (၂၈)နှစ်တို့မှာ အိမ်ထဲတွင် ရှိဆဲဟု ယုံကြည်ရကြောင်း ပြောပါသည်။ ၎င်းတို့၏သားနှင့် မိသားစုတို့မှာ မွန်ဘိုင်းတွင် လုံခြံုစွာရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ကြာသာပတေးနေ့) အစောပိုင်းခန့်က မဟာရာရှ်တာပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်က အဆိုပါ အဆောင်အဦးမှ အမျိုးသမီး (၂)ဦးနှင့် ကလေးငယ်(၁)ဦးတို့ လွတ်မြောက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ CNN-IBN သတင်းထောက် Raksha Shetty က အိမ်ဖော်၊ ထမင်းချက်နှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦး စုစုပေါင်း ဓားစာခံ(၃)ဦး လွတ်မြောက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစ္စရေးသတင်းစာ Haaretz က သတင်းပို့ရာ၌ အဆိုပါဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဗဟိုဌာန၏ ထမင်းချက် Sandra Samuel သည် အိမ်ရှင် Holtzberg ၏ (၂)နှစ်အရွယ်ရှိ သားငယ်ကိုဆွဲခေါ်၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် အတူထွက်ပြေးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရဲဌာနချုပ်၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြောကြားရာ၌ တိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူ(၁၂၅)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတွင် အနည်းဆုံးနိုင်ငံခြားသား(၆)ဦး ပါ၀င်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရဲများဘက်က (၁၄)ဦးသေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူ (၃၂၇)ဦးရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ကြာသာပတေးနေ့)က အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Manmohan Singh က ရုပ်မြင်သံကြားမှ ပြောကြားရာ၌ တိုက်ခိုက်သူများသည် နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ဘယ်ကလာသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း မရှိပါ။ တိုက်ခိုက်မှုသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အပြစ်မဲ့ နိုင်ငံခြားသား များကို ရွေး၍ အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ရပ်အဖြစ် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားအောင်လုပ်ကြောင်းဖြင့် ၎င်းကဆိုပါသည်။
ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး David Milibad က (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ကြာသာပတေးနေ့)တွင် ပြောကြားရာ၌ ဗြိတိသျှနို်င်ငံခြားရေးရုံး အရာရှိများနှင့် မြို့တော်ရဲများပါ၀င်သောအဖွဲ့သည် မွန်ဘိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမည့်အလုပ်မှာ ဟိုတယ်များတွင် ပိတ်မိနေသောသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဗြိတိသျှလူမျိုးများကို ဖော်ထုတ်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များကို ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီများပေးသွားရန်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားပါသည်။
တိုက်ခိုက်သူများကို ဖော်ထုတ်မှုသည် သဲကွဲမှုမရှိသေးကြောင်း၊ သေနတ်သမား(၂၆)ဦးခန့် ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်းနှင့် အများစုမှာ လူငယ်များဖြစ်ကြောင်းဖြင့် CNN-IBN က ရဲသတင်းများကို ကိုးကား၍ ပြောကြားပါသည်။ Union Cabinet ၀န်ကြီး Kapil Sibal က အစိုးရသတင်းဌာနဖြစ်သည့် Press Trust of India ကို ပြောကြားရာ၌ သေနတ်သမားများသည် လပေါင်းများစွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ဇိမ်ခံဟိုတယ် (၂)ခုစလုံးတွင် ထိန်းချုပ်ရေးအခန်းများကိုပါ တည်ထောင်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယခုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို Deccan Mujahideen က ပြုလုပ်သည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းဌာန များသို့ e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပါသည်။ Deccanမှာ နိုင်ငံ၏တောင်ဖက်ပိုင်းရှိ Deccan ကုန်းမြင့်ဒေသကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ Mujahideen သည် Jihad ဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူများဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
Taj Mahal ဟိုတယ်ကို လက်နက်ကိုင်များက ရေလမ်းမှ လှေဖြင့်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲများက ဆိုပါသည်။ ဟိုတယ်အား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် မသင်္ကာသူ (၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ (၇)ဦးမှာ တံငါသည်များဖြစ်ပြီး Taj Mahal ဟိုတယ်အနီးရှိ လှေထဲတွင် လက်ပစ်ဗုံးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရကြောင်းဖြင့် ရဲများက ဆိုပါသည်။ လက်နက်ကိုင်များသည် ရဲကားတစ်စီးအပါအဝင် ကားများကို အပိုင်စီးပြီး အနည်းဆုံးအုပ်စု(၃)စုခွဲ၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အုပ်စု(၁)စုမှာ အနောက်နိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လာလေ့ရှိသော နာမည်ကြီး Cafe Leopold သို့ ဦးတည်ပြီး လမ်းပေါ်ရှိလူများကို လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဘူတာရုံဖြစ်သည့် Chhatrapati Shivaji Terminus ကို လက်ပစ်ဗုံးနှင့် လက်နက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသော နေရာများသို့ ရဲများသွားစဉ်၊ Cama ဆေးရုံကိုလည်း လက်နက်ကိုင်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကျန်အုပ်စု(၂)စုသည် ဟိုတယ် Oberoi နှင့် Taj Mahal သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက် နိုင်ငံ၏အနောက်ပို်င်းကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် အိန္ဒိယရေတပ်မှ ကင်းလှည့်၍ MV Alpha အမည်ရှိ သင်္ဘောမှ သင်္ဘောသားများကို စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသင်္ဘောကို အိန္ဒိယကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ဟု ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များက ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသင်္ဘောမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကာရာချီမြို့မှဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ သင်္ဘောမှ ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုပါသည်။
ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များက ပြောကြားရာ၌ MV Alpha သင်္ဘောမှနေ၍ မော်တော်ဘုတ်(၃)စီးဖြင့် လက်နက်များနှင့် စစ်သွေးကြွများကို သယ်ဆောင်၍ အိန္ဒိယကမ်းရိုးတန်းအတိုင်း မွန်ဘို်င်းမြို့သို့ ထွက်ခွာပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို့ရာတွင် ပါကစ္စတန်နို်င်ငံ၊ ကာရာချီမြို့ ရဲအရာရှိချုပ် Waseem Ahmad က တိုက်ခိုက်သူများ အနေဖြင့် မိမိတို့မြို့မှ ထွက်ခွာသွားသည်ဟု သက်သေအထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရကြောင်းဖြင့် ပြောကြားပါသည်။ အစောပိုင်းက အရာရှိများက ပြောကြားရာတွင် အာရေဗျပင်လယ်တွင် အိန္ဒိယ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ရေတပ်က မော်တော်ဘုတ် တစ်စင်းကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံတကာ မှုခင်းရဲအဖွဲ့ကြီး (Interpol) ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ronald K.Noble က ပြောကြားရာ၌ ဤကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်သူများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ စီမံကိန်းဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်လာလျှင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအစိုးရ၏ အကြီးအကဲက ယခုလို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီး သည် ပြည်ပနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာလျှင်ဖြစ်စေ၊ နို်င်ငံအတွင်းရှိ ရဲဌာနအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကူအညီကို လိုအပ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်း အိနိ္ဒယနို်င်ငံအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွင် ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရုံးတက်ချိန်၌ မွန်ဘို်င်းမြို့ရှိ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်သူများ စီးနင်းသည့် ရထားများနှင့် လူသွားစကြင်္န်များတွင် ဗုံးများကို ဖောက်ခွဲခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဖောက်ခွဲခဲ့သဖြင့် လူ(၂၀၉)ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။ ယင်းလတွင် အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်း Ahmedabad မြို့တွင် ဗုံးများအစဉ်လိုက် ဖောက်ခွဲခဲ့ သဖြင့် လူ(၄၉)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး (၁၀၀)ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ရဲများက ဆိုပါသည်။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, November 28, 2008
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေအကိုရေ**ကျနော် ကိုတက်ဂ်တာ
၀မ်းသာပါတယ်အကိုရေ**ခင်လို့ ရေးခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်
နားလည်ပါတယ်အကို**ဒါပေမယ့် ကျနော်မရေးပါရစေနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါ
ဒီသတင်းတွေက စီအဲန်အဲန်မှာပဲ ဖတ်ဖတ်၊ နယူးယောက်ခ်တိုင်းမ်မှာပဲ ဖတ်ဖတ် မြန်မာဘာသာ စစ်စစ်နဲ့ ဖတ်ရတာလောက်တော့ လျှာရင်း မမြက်တာ အမှန်ပဲဗျ. ။ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ကိုလင်းဦးကြီးရေးထားလိမ့်မယ် ဆိုပြီး အပြေးအလွား လာကြည့်တာ လာရကြိုးနပ်ပါတယ်ဗျာ။ သတင်းတွေအားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျို့။ နောက်ထပ်လဲ ဆက်ပြီး အခုလို ထူးခြားသတင်းတွေ၊ မှတ်မှတ်သားသား သတင်းတွေကို ဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျာ။ အမြဲအားပေးနေတယ်ဗျို့။
(အမှန်ပြောရရင် အခုလို သတင်းဆိုဒ် ဆန်ဆန် ၊ တစ်ကယ့် သတင်းသမား တစ်ယောက်လို ကမာ္ဘ့သတင်း တွေကို သေသေသပ်သပ် ရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ် ရယ်လို့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်တွေထဲ ကိုလင်းဦးပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ယူဆမိသဗျ။ . )